David Wilkerson pamusoro kutenda sangano | Apg29
David Wilkerson pamusoro kutenda sangano
"A mufundisi akati, It rabuda kure, kuti zuva rimwe, muvhangeri simuka uti, Ndakagamuchira kuzarurirwa naIshe, inguva kutanga kunamata Mariya. It achaenda pokuti."
"Uyu ndiwo mumwe mukuru zvaizvidzwa Jesu Kristu kwaiitwa kubva Kristu vhangeri iri wakatsauka iri nomuchetura mari -.. Kunyange China, Africa uye munyika Inguva vhangeri American tega uye dzinoparadzirwa nevavhangeri vakapfuma American uye vafundisi Rich.! "
We rokuhutorazve saka iwe kunzwisisa kwokuomerwa kana usati wazviita. Ndinoonga kuti Mwari akandiponesa kubva pfungwa yenhema kuziviswa uye ndinobvuma nayo sezvo chivi chakawana dzidziso yenhema.
Iwe yokuchema chii sokunge kuSweden nhasi pakati vanhu vaMwari? Aripiko hurukuro pamusoro kubvutwa Bride? Dzimwe nguva zvinoita kuti vaKristu vakawanda vari zvikuru vachifunga kwaAntikristu akakurumbira kupfuura Jesu achauya shure!
Wagadzirira Jesu kuuya? Kungotaura Cross, pamakanzwa ichangoburwa, 1886?
Zvino iwe awane chiduku kuverenga pamusoro David Wilkerson zvaakanyora nezvokutenda kufamba.
The nyadzisa Assembly
Chepakutanga Chirungu rokuremekedza Hwakataura kuzvidzwa nokuungana
na David Wilkerson
Zefaniya 3: 18- Avo vanochemera yakatarwa pavo vanofanira ndichakuunganidzai, avo vari kwauri, uyo mutoro pokunyadziswa. (1917)
Izvi uprofita hunyambiri waZefaniya. Vanofanira kuita nevana vaIsraeri asiwo Zion womudzimu (inova kereke Jesu Kristu mumazuva ekupedzisira). Chokutanga, anotaura kuvaJudha - kuti Mwari aizounza pamwe vakaparadzirwa - asi angadai chete udzose vakanga mwoyo nokuda ezvinhu aisiririsa kwaIsraeri - Aiyeuka vose vakanga vakatakura Kunyadziswa - zvose zvinotyisa zvinhu akapfuurira Mwari imba. Kune vaya vakatakura mutoro, akati; "Ndichakuunganidzai." Akavapa zvipikirwa zvikuru
Uprofita uhwu huri zvakare yakanyorerwa kereke Jesu Kristu mumazuva okupedzisira. MuTesitamende yekare, vana vaIsiraeri makadanirwa mutambo mazuva manomwe. Pazuva rorusere - inonzi nokuungana. Panguva iyoyo vakasangana pamwe chete - akaisa zvose parutivi uye kuisa pfungwa nokunamata uye kurumbidza Baba vavo vokudenga. Rugwaro runoti: "Nezuva rorusere munofanira kuita ungano." Izvi mabiko muunganidzwa anomiririra Old Testament, Mwari akaparadzanisa chechi anofanira kusangana naShe.
Ndiyo kereke Jesu Kristu mumazuva okupedzisira. Maererano naZefaniya imba yaMwari mumazuva okupedzisira kuti uchaninipiswa. Shoko rechiHebheru pano rinoreva "uye kuzvidzwa." Ichava nyadzi uye zvinozvidza imba yaMwari. Hatisi kutaura pamusoro akapanduka, sunungukei chechi ano - naJehovha kuti pazuva rokutongwa, Achaita kubata nechechi. Tinogona kuvanyengeterera, asi hatifaniri kutambisa misodzi yedu pamusoro payo kuti haasi Assembly chaiye.
Mwari ari kutsvaka vanhu vanoda nekuwungudza nokuda Kunyadziswa kuti anovandudza Chechi yaJesu Kristu mumazuva iwayo. Ndiri kutaura pamusoro chechi kuti akaberekwa paPendekosti. Ndiri kutaura pamusoro chechi kuti wakaberekwa Pauro uye zvaidzidziswa nevaapostora. Ungano kuti akaberekwa muchokwadi raJesu Kristu kuti atonge. The patsva chechi iri pasi kurwiswa. Assembly vakaninipiswa.
Zvave akaprofita kuti munguva ino kunyadziswa, nyadzi uye chakashata, Mwari achamutsa vakasara mutsvene ndiani achachema nokuungudza pamusoro kusvibiswa ichi - Mwari achava vachasara kuti kugara pedyo asina zvaaiita apo izvi zvose inopinda Assembly. Mwari anoti: "Ini achava vanhu haangatenderi kugutsikana kurarama upenyu hwakanaka uye kucherechedza quacks uye mari anopenga venhema navaprofita mumba yaMwari uye kuparadza zvose."
Mwari achaunganidza vanhu vakafirwa pamusoro ichi - kana uchinyatsondida Ishe uye rudo chechi yake, haugoni kutarira kuitika nhasi (uye Ndichataura nezvomutsa zvaizvidzwa izvi nezita). Kana pashure pokunzwa zvandinoda kutaura pamusoro zvaizvidzwa izvi, anogona kufamba kumba kubva kuchechi uye vachiti, "Ini vanonamatira nezvakanyorwa mu Mateo 18, masuwo egehena haingamiri kuna Assembly, ndichaita musafunganya pamusoro pangu, Mwari ane zvose pasi pesimba.
Hazvina kukwana. Mwari anoshandisa vanhu. Mwari anoshandisa vanhu kuti vaite basa rake. Haana kutumira ngirozi. Ngirozi misodzi pamusoro paro, asi Mwari haana kushandisa ngirozi kuita chinangwa chawo. Anoshandisa varume nevakadzi vane akaputsa mwoyo uye mitoro -. Kutongwa pamukova, Jesu. Zuva raJehovha rava pedyo.
Muka vakuru. Muka vafundisi. Muka vafudzi.
View pamusoro chechi. Batanidza Rye. Orisunga. Sei isu zvaizotora pamusoro mutoro nokuungana nokuninipiswa? Joel akati, "nokuti mbeu yakaipa yave kudyarwa.
A evhangeri anowana zvose pamberi iome. Zvose zviri girini uye naMwari uye akachena hwunosvava. Mbeu iri ruttet- vanhu vari kuziya nenzara kunzwa shoko raMwari wakachena asi hakuna Mafuro. Boka Maramwirwa uye nzara. The yenzizi panze. A moto usina kufanira riri kuparadza vafundisi. Ezekiel anoti Vafudzi vari tsika minda yakanaka uye kudya zvakanakisisa pachako. Ndeipi zvinonyadza kwazvo zvinhu zvichiitika muKereke raJesu Kristu nhasi?
Uyu ndiwo mumwe mukuru zvaizvidzwa Jesu Kristu kwaiitwa kubva Kristu. evhangeri iyi wakatsauka iri Kusvibisa mari - kunyange China, Africa uye pasi pose. Inguva vhangeri American yakaitwa uye dzinoparadzirwa nevavhangeri vakapfuma American nevafundisi. Wealthy!
Zvinondifadza ndakashungurudzika kuti vanhu vakawanda vanogona kunzwa zvisungo uye kuona mavhidhiyo kuti vanobuda izvi kubudirira Misangano pasina achichema pamusoro pavo. muchetura uyu yapararira munyika yose. Cuba kuda kuvhura, uye ivo vanoda kupinda pane imwe nguva kubudirira kwavo vhangeri uye uti kwavari, "wanga murombo kwenguva yakareba zvakakwana, Mwari anoda Cubans zvose zvinofanira kuva mupfumi."
vhiki rino ndakagamuchira vhidhiyo tepi zvakanyorwa pamisangano Kenneth Copeland vake. Ndakateerera kumutauri uye vakava romuromo. Friends verenga Testamende Itsva, uchawana kuti muapostora Pauro akataura nevaya vakanga vatenda vakanga vaapostora venhema. Akanyevera uye zvaakareva mazita avo. Ndinokuudzai kuti kana uchiteerera zvandinotaura kwamuri, asi kuti kuchema, ipapo muri bofu. Imi mapofu mumudzimu. Une dzakaoma mwoyo. A mwoyo ane yakaoma nhumbi kumativi kuitira kuti evhangeri yakaisvonaka havagoni pinda nayo. Mava saka nomuti neevhangeri kunyanyisa ichi kuti hamusi venyu kwaye. Haukwanisi kuparidza chokwadi. Unogona kuvaratidza nekuti vane zvombo pamusoro yavo chinhu yakanyorwa. Hard mwoyo.
Vamwe musingadi kuchigamuchira. Kana mapinda mweya yenyu Copeland kana matepi Hagin vake, musingadi kuita zvamunonzwa. Friends, Ini ndiri mufudzi, I makadanirwa naMwari. Ndapa chechi iyi chipikirwa. Chero bedzi tikaramba kumira pachikuva ichi, takaona mhumhi matehwe emakwai vakauya kuba makwai, tinofanira kusimuka uye mhere. Zviri kwauri kuti kuita chimwe chinhu nezvazvo. Ndakagara vhiki rino uye vakateerera mukurukuri pane musangano uye Ndakashamisika uye kukuvadza. pakutambudzika A waJehovha wakauya pamusoro pangu. Ndicho chikonzero ndiri kuparidza mashoko ichi. Chemai pamusoro payo.
I kudzokorora shoko neshoko zvataurwa. The vakurukuri zvaisagona kutaura dzapedza nekuda vose vakakwira uye akaisa mari mubhanhire. Chikonzero zvavanoita kuti dzidziso itsva vakabva uye vachiti, "kana uchida kuropafadzwa, saka unofanira kuwana akaropafadzwa muvhangeri kana mufundisi unogona kuwana nokuti ane zvizhinji awane yakawanda waiye shoma, kunyange nezvaanazvo achazvitorerwa naye. Kana ukaona kuti akaropafadzwa kubudirira muparidzi uye kumupa mari, uye ucharopafadzwa. The Kwakaropafadzwa ari, kana mopa kuna avo vari akaropafadzwa - "zviri sezvinoita chepiramidhi. Kana varume ava vakanga vari munyika, vangadai vanoguma mujeri. Pyramid zvirongwa. Uyo ane pamusoro uye vanoita sevasina zvitsvene, uye vakataura loudest. Mazana vanhu vakauya kusvikira muhomwe yake vakanga makazara. Vatadzi inoti, "ichi ndicho vhangeri pachena? Banknotes? "
Teerera zvataurwa. Mukurukuri akasimuka akati, pamusoro chirikadzi murombo vanogamuchira rubatsiro evanhu achikutsiura 5 madhora, saka unofanira kutora, Eria akatora zvokudya yokupedzisira wechirikadzi. Muri vakazodzwa, iwe vakakodzerwa nazvo, muzvitorere. "The chete Mukurukuri akati," Ndinogara sikweya rutsoka imba 1,000. Ndichavaka mikuru ikozvino. Mumwe kuti Mambo Soromoni aizova kudada. I akabhadhara 15,000 chete US madhora imbwa. Unoona zvikuru mhete pamunwe yangu, ndakanga ichangobva muna Jamaica akaripa 32.000 US madhora nokuti. Ndinoda kuti muzive kuti kana vanhu ndinorarama apo achimhanya apfuura neimba yangu uye ona dzangu Rolls-Royce ari pamba, saka vanoziva kuti pane Mwari kudenga. "
Ndiudze, ndiro vhangeri? Ndiudze, musandichema pamusoro payo?
Mumwe vakurukuri akasimuka akati, "Takaita sungano Hama Copeland kuti pamusoro rinotevera gore, hapana mumwe wedu atambure zuva chete. Hatifaniri kunzwa kwekanguva mwoyo. Hatidi kurwara kana vachida chimwe chinhu. Tinofanira nezvikomborero zvose. Tinoramba zvose kutambura, vose marwadzo, matambudziko ose zvemari. " unonakidza zvakanaka kana uri pamusoro.
Izvi chii kwazvo kwandiri kupfuura. Izvi yakaparidzirwa. "Mweya Mutsvene haangagoni richadururwa pamusoro penyu kusvikira muri mari dziriko. Usati inobudirira inogona Mweya Mutsvene asingaiti chinhu. "
Zvifunge! Sei izvi zvinoita here? Chii chinoita kuti mweya wako kana uchiona murombo vanhu vanogara paruoko pamuromo, uye pakarepo anoti, "kutsvaka mari" uye vanhu vakamhanya vakaita anopenga uye kana Vanomhanya, vanoti isu "isu vanoti upfumi."
Ndakabva kuona vanhu zvezvokudya akaita nyoka kubva dzavo Chair uye pauriri. Ndinotarisa Evangelist simuka muridzo senyoka uye vanhu pakugumburwa kwose kwose. Friends, chii chiri kuitika?
Kunyadziswa högtidsförsamligen! Muporofita akavati "imbwa vanokara, vasingadi Mwari nharirire". Friends, kana akanga mwoyo waMwari uye pakutambudzika raShe mungadai achadanidzira naIsaya iwe, mapofu Varindi, vasingazivi imbwa mbeveve, akarara, hope rudo, imbwa dzinokara dzisingatongoguti.
”Jag har 1000 kvadratmeter men jag skall sälja det och jag skall bygga ett hus som kung Salomo kunde bo i-” Att aldrig få nog. Han sade, ”herdar som inte kan förstå, alla ser efter sitt, allt för att få sina egna behov tillfredsställda. Jeremia sparade inte på orden. Han sade, ”Mitt folk är som förlorade får. Deras herdar har fått dem att gå vilse.” du säger, ”Pastorn, du har ingen rätt att tala så skarpt över det här ämnet.” Om du tycker jag är skarp, läs då Hesekiel 34:1-10.
Iwe tora mamiriyoni 50 kubva chirikadzi uye anotenga imbwa kuti SEK 150 000. Iwe utore kurega chirikadzi murombo, uye iwe kuvaudza kuti havana kutenda kwakakwana - nokuti havana kubudirira. Iwe utore shinda kubva makwai. Hausi kutsvaka mweya achitsvaga mari. "Vafudzi fatten pachavo uye kwete makwai, naizvozvo, imi vafudzi, inzwai shoko raJehovha. Zvanzi naJehovha Mwari wako, ona ndine mhaka navafudzi, uye ini ndicharipira makwai kubva pamaoko avo, uye vanofanira kumira zvokudya kumombe. Uyewo havafaniri fatten pachavo zvakawanda, nokuti ndicharwira makwai kubva pamiromo yavo, uye havazorambizve kuva nyama yavo. "
Ini achabvisa dzemombe varume meno izvi. isu Mwari kubatsira.
Chechipiri, kukanganisa vavakaropafadzwa Mutsvene. Ndiyo kunyadziswa akaipisisa. Hazvaizova tive pasi zviso zvedu. Nzira iyo Mutsvene kukanganiswe kune yose.
Zvinosuruvarisa kuti kuona kuti hapana ungwaru saka zvishoma zvasara mukereke uye pakati vafudzi zhinji uye vatungamiriri vechechi. Havatombozivi kunyange kuziva kana Mweya Mutsvene akavhiringika kana kunyombwa. Kune zviuru vaKristu vari kuenda rumutsiriro danidziro uye ona zvinhu vanotenda zvinobva Mutsvene, asi havazivi zvavari kugamuchira. Ivo kuombera vachirumbidza Mwari kana munhu akamira pachikuva uye vachinyomba + uye misrepresenting Mutsvene, uye havazivi nezvazvo.
Yose vekushangazhika masangano, kusanganisira American kwePentecosti, dzakaparadzaniswa rumutsiriro venhema. Ose zvinhu zvichiitika - chinhu chitsva anenge ose vhiki. Vatungamiriri havazivi kana kugamuchira kana Vanotuka. Havazivi zvokuita. Tinowana tsamba kubva mazana vafundisi pasi pose. Ivo vanobvunza. "Chii zvakarurama uye zvakaipa?" Varipiko vakuru? Apo munhu anogona kutitungamirira iri?.
Friends, chii chatinoona chichiitika mune inonzi rumutsiriro nhasi uye chii chiri kuitika Mutsvene, tinogona kuwana hwaro nokuda manyorero. Chinhu hatigoni kuwana muMagwaro inofanira kurambwa. Zvakakwana akarambwa!
Ndinochema pandinoona mavhidhiyo aya kuti vanhu vari andituma kubva munyika. Yose ungano kudzora, akawira pasi, achiseka hysterically, achidzedzereka sezvizvi zvidhakwa, Achitsaudzira sezvinoita nyoka, vanohuhudza akafanana nezvikara. Tine vaevhangeri anomira uye akaridza pamusoro vanhu kuti vaende kuwa, sezvinonzi Mutsvene vakanga dziri maari. Unobudisa kwayo muchiso bhachi pane vanhu uye anoti "ruoko rwaJehovha."
A vhangeri itsva ichangobva kusvika America. Friends, zviri kunaka uye mbishi, asi ndinokuudzai. Kana iwe siya Shoko parameter, kana iwe ukati: "Ichi chinhu chitsva, Mwari ari kuita chinhu chitsva? Handisi kuzvinzwisisa, hazvisi mutsamba asi handidi kuramba Mweya Mutsvene. "
Friends, kana hazvisi muBhaibheri, tinofanira kudzivisa izvozvo. The ichangoburwa ndechokuti unogona kupinda muumambo hwaMwari kana haudi mwana muduku. Vanhu vanouya vakapfeka manapukeni kuitira kuti vanogona kuita zvavanoda pamisangano. Ndicho ichangoburwa. Friends, Chichaguma kupi?
A mufundisi akati: "Zviri kwabva kure, kuti zuva rimwe, muvhangeri simuka uti, Ndakagamuchira kuzarurirwa naIshe, inguva kutanga kunamata Mariya." Ruchapinda pokuti.
Mumwe muvhangeri anozviti Mweya Mutsvene mushandi wemubhawa. Anoti, "Uyai muzariro uye zvokunwa Mutsvene." Ivo vanouti waini itsva. I mashoko omuprofita achirira munzeve dzangu, "zuva raShe riri pano, Rinokura zvakaipa, Chemai pakati dare nearitari. Shongai saga nguo. Wakaiswa uye kushungurudza vanhu wawira. "
Jesu achauya. Vazhinji vachiri unreached. Pandinoona VaKristu kuenda chii vakadana Mutsvene nemizariro, vanodzedzereka somunhu akadhakwa, vachaparidza mashoko hwaJoeri kwandiri zvakajeka, "ukamuka, imi muri akadhakwa, uye chemai, mose imi vanonwa waini itsva, nokuti kukohwa kumunda zvinopera."
Mweya ezviuru afe, saka chii chauri kuseka? Kuti Mweya Mutsvene kushanda kwose kwose panyika. Unofanira kukwanisa kutora kuti kupfuura hwakaipisisa uye zvakaipa nzvimbo. Unofanira kukwanisa kutora kuti nyika murombo. Unofanira kutora kuti pemasese kwevanhu, uye inofanira kushanda ikoko. Haikwanise kushanda chete nevapfumi America. Zvinofanira kushanda kwose kwose panyika.
I kudenha vanhu ava kutora kuseka vhangeri yavo muBalkans ikozvino. Enda yevapoteri apo vakadzi kuchema nekuti varume vavo apfurwa. vakunda vavo vave chibharo. vana vavo vane nzara. Ivo vakarasikirwa mudzimba dzavo, saka kumbira kuti kuenda kubhawa - The Mutsvene anoda kuti kuseka. Izvi zvinonzi kumutsidzirwa kuuya Madison Square Garden chirimo ichi. Kana unogona manyorero, imi munotakura mutoro nokuungana, ungapindura sei kuda kutora dzidziso yakadaro.
Rega ndikuudze ari kuseka. World. Vasingadi Mwari vahedheni. Zvazova chinoshamisa. Munguva saka pedyo kuuya kwaKristu kana kereke Jesu Kristu anofanira inobatwa chakavanzika muwadhiropu munyengetero. Kana vanofanira mukachema vakarasika. Kana kuti vane chido kusiya zvose uye atevere Jesu. Kana nokusingaperi dhora bhiri anofanira kutaurwa. Mwari American. The American avgudadyrkandet. World kuona kupenga ichi uye munoziva zvavanofunga - kuti Mweya Mutsvene ndiwo ringmaster. Chinhu rerunziro sekasi.
Handina basa kuti vanhu vafunge zvakare. Handina basa kana vanhu havadi mugwaronhau zvakare. I hanya mweya yavo uye kuti vakawanda vakapofumadzwa. Ndine mutoro pamberi paMwari kuti vamire pamberi peungano kuti iye akadana kwandiri kushumira, uye dzinonyevera iwe uti kuti nokutukana izvi kuchechi yakatarwa, uye Bhaibheri rinoti kuti iwe achachema pamusoro payo. Vakuru ichapa. Kereke, mufundisi, vashandi, ivo vaEvhangeri. Tinofanira kunyengetera pasi nhare idzi.
Pakupedzisira, mumwe chinozvidzwa pokuzvidza Assembly demoralization. Vane nhamo avo vanoti zvakaipa zvakanaka uye zvakaipa zvakanaka - kuti zvinoda rima panzvimbo pechiedza uye chiedza panzvimbo perima. Kuti zvinoita zvinovava pezvinotapira uye zvinotapira unovava. (Jer 23:15). Ndaona zvinhu zvinotyisa zviri vaporofita. Ivo upombwe, vanofamba nenhema, uchapupu maoko avakaipa uye hapana kudzoka kubva zvakaipa.
Ndakagamuchira tsamba vhiki rino kubva mukadzi wechiKristu hasha. Akati, "murume wangu anozvidaidza muKristu, ari mutambi mukuru, iye anotambira mamiriyoni." Akati, "Ndagara saka kunetseka nezvengozi uye boka zvaanazvo." Ndakafunga, "Ini kumubvunza kuenda mufundisi."
Akati, "Hama Wilkerson, hauzivi kuti chii chakaitika, ndine hasha saka, kukuvadzwa uye vavhiringidzika. Ndakatumira yedu multi-miriyoni murume kubheja kuti mufundisi wedu. "
Akati, "ndakatsvaka rugwaro kubva 1 Genesisi kusvika kuna Zvakazarurwa, uye handigoni kuwana chinhu muMagwaro kuti kupopotera kubhejera. Ndinoona hapana chivi mariri, saka kunakidzwa. "Akanga vakashamiswa," sei munhu waMwari kutaura chinhu chakadai murume wangu? "
Izvi ndizvo chaizvo zvakaitwa naJeremiya akati, "vafundisi vachiratidza vezvakaipa maoko uye hapana paanotendeuka pane zvakaipa zvake." Anotsanangura kuti nei angashora Assembly demoralization uye nei vakatumidza zvakaipa zvakanaka uye zvakaipa zvakanaka uye zvinovava pezvinotapira uye zvinotapira unovava.
Akati, "Vaporofita wakafeva, nokufamba nenhema." Ani naani ane chivi muupenyu hwake zomiri uye vanotaura pamusoro chivi mumusasa. Ari nechokwadi wake upombwe, yake chivi uye yake pfungwa zvakaipa.
Handisi kuzochera chero varanda munyika pamusoro Muzinga. Ruzhinji varanda moto Mwari. Kune vechiduku varanda vari ndakanatswa zvakaipa zera rino. Ndakasangana vazhinji vavo uye ndinovonga Mwari nokuda kwavo. Kunyange guta rino, Ndakasangana mamwe akarurama kupfuura vaparidzi Handina akasangana muupenyu hwangu hwose.
Hwakawanda varanda neni kunzwa kurwadziwa uye vari vachitsvaka uye kumirira manzwi kuti anokwanisa kuzivisa zviri zvakaipa. "Kudai vakanga vakamira pavazhe dzangu uye vakasimuka vanhu vangu vanzwe mashoko angu - kana vakanga ataura zviri mumwoyo mangu. Kudai vakanga ataura kubva pfungwa dzaMwari, vangadai vakatendeuka vanhu kubva dzavo dzakaipa uye dzavo nemabasa akaipa. "
Unogona kuona kana munhu anoziva Jehovha Mwari anoti pamusoro mumwe, "Ini handina kuvatuma, ini handina kutaura navo, vanotaura kubva yavo fungidziro. Kubva zvakaipa mumwoyo yavo.
'Vanotaura zviratidzo pamoyo yavo, handina kuvatuma. Handina kutaura navo. Vanoti kuna vanondizvidza, 'Ishe akati, Muchava norugare,' uye ivo vanoti wose anofamba unofadza moyo wake uye pachake Kufungidzira ake 'hapana chakaipa pauri.' " The chinozvidzwa nokuungana yaizova kusuwa zvikuru vose vanoda Kristu uye Church Yake. Izvi aizova kusuwa mukuru yavo - kuzvidzwa zita rake uye ungano yake. Kuchemera pamusoro Assembly hurumende. Kana iwe kumira, uye kana ukatora mutoro raShe kwauri, kuburikidza nokunyengetera nokutsanya. Mwana wese waMwari vanofanira kunyengetera kuti vose vanobatwa iri kusunungurwa. Regai kuubata, usafamba pedyo nayo, kana ukaenda ikoko kubva kuziva, zvichava musungo kwauri zvichidiwa zvose zviri enyama.
Kusvikira munoziva kuti kubata zvokudya yako Mutsvene, saka kugara kure nayo. Jeremiya akati, "Jehovha Mwari wako ari pakati pako ndiye simba. Iye uchaponesa, achaita achakufarira nokupururudza. Iye uchanyarara parudo rwake. Iye uchafara pamusoro penyu ne vachiimba. "
Sei? Nekuti iye akawana vanhu vakafirwa pamusoro chii vanosuruvara mwoyo wake. Vakatakura mitoro raanotakura, kuzvidzwa pamutemo Township.
Izvi zvichava "rudo musungo". Muchanzwa. "Tinoda vanhu vose. Hazvina basa zvauri kuparidza. Hazvina basa kana uri kubudirira. Hazvina basa kuti vhangeri wako - kana zvimwe. Ngatitaurei kupa mumwe munhu guru kumbundira. "Vaviri vanogona sei kufamba pamwe chete pasina kubvumirana. Sei unogona kufamba nayo usingabvumirani navo, riri unbiblical tsika, haukwanise. Chinhu rudo musungo. Vanoti, "musatonga munhu."
Izvozvo handizvo zvinodzidziswa neBhaibheri. Panoti kuti tichatonga akarurama pakutonga. Kushorwa akatsiura nomwoyo murefu. Handina kumira sipo mundiro, ndakamira paruware. Mwari ari kuedza kuti ndikuponese, Ward.
Chii pfuma yaMwari muna Jesu Kristu? rugare naMwari, uchenjeri hwaMwari, Kristu wake, zvose zviri Kristu ndeyedu.
Friends, chenjerera! Chenjerai!
Handina ndifare here? Wagadzirira kutora mutoro waJehovha. Haukwanisi kuzviita venyama yako. Dzokai pachako naMwari.
Nguva yasvika danai vanhu kuungano. Kana uine chimwe matepi aya kana mabhuku, achikanda paimba yenyu. Regai kuvapa kure, uzvipise. Kana munhu akakukoka kubatana misangano iyi, ipapo uti, "Ndine urombo, handidi kuti vachiziya neshoko uye handidi mwoyo wangu aiyanika uye iome. Ndinoda vakachena shoko kuna Ishe akatendera ini kukura. Handidi chero mashoko unofadza nenyama yangu, kana kuti asike makaro mumwoyo mangu. "
Mwari anotipa zvatinoda uye anoita zvishamiso, asi anozviita nenzira yake. Kwete misappropriating uye zvisizvo Rugwaro.
Uyu muverengi mail. Mafungiro omunyori ndiko zvavo uye kwete hazvo chii Apg29 anomirira.